Madaxda Maamul Goboleedyada oo shir uga furmayo Xalane | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxda Maamul Goboleedyada oo shir uga furmayo Xalane
Waxaa maanta la filayaa in magaalada Muqdisho lagu qabto kulan u dhaxeeya Madaxweynayasha Shanta Maamul goboleed iyo wakiillada Beesha Caalamka ee loo yaqaan C6+.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay xaqiijinayaan warar hoose oo ay heleyso Keydmedia Online, Madaxweynayaasha maamuladda Puntland, Galmudug, HirShabeelle, Koofur Galbeed iyo jubbaland ayaa tan iyo billaawgii Febaraayo markoodii koobaad maanta u kulmi doona si wadajir ah.
Kulan doceedkaan, looga arrinsanayo, ajandaha Shir Madaxeedka Qaran, ayaa waxaa qeyb ka ah, wakiillada Beesha Caalamka, gaar ahaan kuwa loogu yeero C6+, kuwaas oo hore u sheegay in loo baahan yahay kulamo aan rasmi ahayn, ka hor inta uusan furmin shirka wada-tashiga qaran.
Kulankaan la filayo inuu dhawaan ka furmo mid ka mid ah teendhooyinka ku yaalla xerada ciidanka cirka ee Afisyooni ayaa ka dhashay, kadib, kulamo labadii habeen ee la soo dhaafay ay lahaayeen Madaxweynayaasha maaluladda Galmudug, Puntland iyo Jubbaland.
Saciid Cabdullahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam, ayaa si adag kaga soo hor jeeda habka ay wax u waddo Dowaladda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo, waxayna si cad u diideen xaadiridda shir ay qaban-qaabadiisa lahayd Beesha Caalamka oo DF ay boobtay ajandihii looga doodi lahaa.
Tan iyo shirkii Dhuusamareeb 4 ee isaga oo socda uu diyaarad ka soo raacay Farmaajo, ma aysan kulmin Shanta Madaxweyne ee maamul goboleedyada, waxaana la filayaa in kulankaan lagu jeexjeexo, qodabada looga hadli doono shir madaxeedka soo socda.